Bisikileta tsara ve ilay manokana Sirrus 2.0? - Hevitra
Tena > Hevitra > Review manokana sirrus - mamaly ireo fanontaniana
Review manokana sirrus - mamaly ireo fanontaniana
Bisikileta tsara ve ilay manokana Sirrus 2.0?
nySirrusmodely dia heverina ho ny sasanyny tsara indrindrafitness-hybridbisikiletaeny an-tsena, indrindra ny vidiny. Ny ankamaroan'ny mpitaingina bisikileta dia mila bisikileta azony aleha na aiza na aiza, na an-tanàna izany na eny an-dalana.
Androany miresaka momba ny Sirrus manokana isika. Ity no bisikileta ho an'ny mpitaingina mpitaingina fahasalamana tanteraka.
Te hivoaka ianao ary hanana fiaran-dalamby tsara, ataovy haingana kokoa ny fitempon'ny fonao. Io no fon'ny arabe, ny fanahin'ny tanàna, noho izany dia mora kokoa ny mandehandeha eny an-dalambe eny an-tanàna satria mety ho zato taona na karazana fiara Charity. Ka ndao atomboka eto.
Bisikileta Sirrus manokana no manana fork karbonina. Hahasoa anao izany. Tena hampihena ny lanjany izany ary hampiakatra ny fampiononana amin'ny bisikileta satria ho afaka hampihena ny hovitrovitra be ianao.
Avy eo dia tonga amin'ilay tena endriny ianao. Manolotra ny Sirrus manokana amin'ny ambaratonga telo izahay. Misy ny aluminium manokana A1, ny alimika E5 manokana, ary avy eo ny zana-kazo fibre karbonika ao amin'ny faritra avo lenta.
Amin'ity haavo A1 ity dia manana bisikileta mora azo ianao. Tena handeha tsara izany, saingy handresy ny vidiny azonao izany. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny E5, dia ho hitanao fa lasa mora kokoa ny mitaingina ary manana somary somary somary malemy ihany koa ianao.
Ary farany, ny fibre karbaona no ho sehatra maivana sy mifanaraka indrindra amin'ity Sirrus manokana ity. Ho maivana tanteraka izy io ary hamela anao hanafaingana sy hiakatra haingana. Ny zavatra iray tena zava-dehibe amin'ny frame aluminium ao amin'ity bisikileta ity dia ny mety ho lasa espaniola tsotra ho an'ny boaty tsotra ho an'ireo bisikileta ireo, saingy ny fahafantarana fa ireo mpitaingina ireo dia mpitaingina fitondra-tena ary izy ireo dia tena anisan'ny mpamily be mpitady indrindra any. , nanao dingana iray izahay mba hahazoana antoka fa ny fikosohan'ilay fantsona - ka ny fantsom-boaloboka tena izy tenany mihitsy aza - dia nototofana fatratra noho ny fahombiazan'ny lanja maivana ary avy eo ny fitarainana fitoriana ihany koa.
Midika izany fa hahita hateviny kely kokoa ianao amin'ny rindrin'ny alimina eo amin'ny faran'ny fantsona ary avy eo manatrika ny afovoany, izay tsy dia tokony ho matanjaka be loatra, afaka nanalefaka izany isika ary nanome fonosana maivana kokoa ianao amin'ny ankapobeny. Amin'ity bisikileta ity dia tadidio fa afaka mitaingina bisikileta haingana sy mailaka ary mahafinaritra izahay. Ary lazaiko fotsiny fa ny ampahany lehibe amin'ity bisikileta ity dia raha te handeha haingana ianao, fa angamba tsy izany raha mitady ny fampisehoana drop bar amin'ny bisikileta ianao no bisikileta ho anao.
Tsara izany, koa ahoana no hahazoantsika ireo fiasa tsara rehetra ireo miaraka amin'ity Sirrus manokana ity? Azo antoka fa nanana fantsom-baravarana madiodio izahay fa manana familiana haingana ianao, saingy somary nilamina ihany koa ka nahatsapa ho nahazo aina sy nilamin-tsaina ianao nitaingina bisikileta. Avy eo nijery ilay fantsona ambony izahay ary tena te-hanao izany. Azonay antoka fa nanana fantsona ambony izahay izay nametraka ilay mpitaingina toerana iray tamin'ny tena taratra ny toerana misy ny mpitaingina sy ny halavan'ny mpitaingina bisikileta tena izy.
Noho izany dia nitady fantsona ambony malalaka sy malalaka izahay, mba hahatsapan'ity mpitaingina bisikileta ity fa avy eo ny halaviran-kodiarana, noho izany ny bisikileta amin'ny bisikileta ity dia somary lava kokoa noho ny hitanao amin'ny bisikileta mihazakazaka, angamba somary akaikin'ny Lalan'ny Faharetana. Saingy mbola hanome anao bisikileta haingana haingana sy haingana haingana ianao, nefa mbola hanome anao ny fitoniana ilainao amin'ny valizy kely lava kokoa. Tsara izany, koa andao hiroboka amin'ireo singa vitsivitsy amin'ity Sirrus ity eto.
Ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra dia ny Body Geometry grips sy ny lasely, ny fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa mahazo aina amin'ny bisikileta mandritra ny ora maro ianao, ny fizarana tariby anatiny, zavatra tsara izany. Amin'ny bisikileta marobe toa an'ity dia alefa any ivelany fotsiny ireo tariby. Ity iray ity dia mampandeha ireo tariby ao anatiny, izay mitazona azy ireo ho tsara sy hadio, miampy, ho bonus fanampiny, manadio ny endrik'ilay bisikileta.
Amin'ny alàlan'ny fitazonana ny telegrama lavitra ny singa dia hanana fanovana tsara ianao ary vitsy ny dia mankany amin'ny fivarotana bisikileta mandritra ny fotoana lava. Ary avy eo ambonin'izany, hisy fotoana voafetra mety ilainao ny mitaingina kely amin'ny orana ary manantena aho fa hampiasa ity bisikileta ity amin'ny fiara kely handeha hiasa kely koa. Noho izany dia manana ny Sirrus vonona izahay amin'ny valizy sy ny fender.
Izany no Sirrus, ny fon'ny arabe, ny fanahin'ny tanàna. Mivoaka sy miditra.
Tsara ve ny bisikileta sirrus?
Inona no atao hoe Sirrus manokana?
Na inona na inona kinova nofidinao, nySirrustsipika feno avo-kalitaoary safidy mora vidy ho an'ny mpandeha mitady aLEHIBEisan-karazany ny fahaiza-manao. nySirrusX 4.0 hitsoka eo akaikin'ny toerana mamy, miaraka amin'ny fandehanany malama, fanampin-tsakafo ho an'ny komuter ary kodiarana malaky mifintina. Izy io dia iray heck ny hybrid.
Firy ny hafainganam-pandehan'ilay Sirrus manokana?
nySirrusmanambatra ny endriny aliminioma premium antsika miaraka amina fonosana mateza maharitra sy frein mora raisina mba handehanana tsara sy haingana.
Ohatrinona ny bisikileta Sirrus manam-pahaizana manokana?
Ny làlana 500 $ tsara indrindraBisikileta:Sirrus manokana
Toy ny saika ny lalana rehetrabisikiletaamin'ity sokajy ity, nySirrus($ 500) dia miaraka amina bara fisaka, kodiarana matevina, ary endrika hafa mifantoka amin'ny komuter.6. 2012.
Sirrus manokana no bisikileta?
nySirrusfoto-tsakafon'ireomanokanafilaharana, manomebisikiletageometry miaraka amina fikirana bara fisaka ahazoana mandeha haingana sy maharitra.
Bisikilety ve ilay Sirrus namboarina?
Ohatrinona ny sirrus manokana?
Ny haavon'ny fidirana 400 $SirrusNy fanatanjahan-tena dia manana fefy vita amin'ny aliminioma sy frein-peratra v-frein. Na ny Alloy Disc ($ 600) na ny Sport ($ 850) dia mampiasa aliminioma A1 SL avo lenta kokoa ho an'ny frame-ny ary miaraka amin'ny frein hidina hydraulic.
Marika tsara ve ny bisikileta manam-pahaizana?
Amin'ny ankapobeny,manokanamendri-kajamarikaizay mamokatra kalitao avo lentabisikileta, na izany aza, misy teboka iray na roa tsy maintsy adino ao an-tsaina raha toa ka mieritreritra ny handrotsaka ny iray ianao. Toy ny ambony indrindrabisikiletampamokatra izy ireo mamokatra tandavan-tampon'ny farany ambony indrindra, izay azonao antenaina hahazo be dia bebisikiletanoho ny volanao.
Bisikileta tsara ve ny fanatanjahan-tena Sirrus manokana?
Ny specialised Sirrus Sport dia safidy tsara ho an'izay olona matotra amin'ny fanatsarana ny fahaizany. Amin'ny vidiny avo kokoa, dia be dia be ny atolotra miaraka amin'ny singa tsara kokoa sy ny geometry mifantoka amin'ny mitaingina mahafinaritra.
fakana an-keriny tetezana
Ohatrinona ny lanjan'ny Sirrus manokana x 4.0?
Lanja: 23,3 lb. (S) Vidio Izao Sary Bebe Kokoa Raha mitady bisikileta mahafinaritra ianao satria mitaingina utilitarian dia diniho ny Specialised Sirrus X 4.0. Haingam-pandeha sy azo ovaina izy io, mahatonga azy io ho tsara ho an'ny fivezivezivezy haingana amin'ny tanàna sy ny fivezivezena mahomby.
Karazan-tsarimihetsika inona no ananan'ny Sirrus Manokana?
Ny endriny dia alimo ary vita tsara, raha vy kosa ny fork. Na izany aza, ny frame dia miaraka amin'ny zavatra rehetra tadiavinao amin'ny bisikileta hybrid, miaraka amin'ny eyelets amin'ny toerany mba hampitaovana ireo lambam-baravarankely sy mpiambina fotaka raha misafidy izany ianao. Araka ny antenainao amin'ny bisikileta misy an'io karazana io dia milamina tokoa ny géometry ary manome anao toerana mahitsy.